FJKM Ampahibato Firaisana: Dimy minitra Ireo mpamono ny kristiana
FJKM Ampahibato Firaisana : Dimy minitra Ireo mpamono ny kristiana
Tamin'ny taona 1906, tany Rosia, dia nisy andiana mpandroba sy mpisetrasetra izay nampahory sy namono ny mpivavaka kristiana tao amin'ny faritra anankiray. Indray andro, nandindona an'ity fianakaviana iray fa ho avy handripaka azy ireo ireo andiana mpandroba ireto, ka nahery nangataka sy nivavaka tamin'Andriamanitra izy ireo. Matanjaka sy ary fitaovana tokony izany mpandroba izany, ka fahafatesana no hihatra raha misy manandrana manohitra azy ireo.
Nanomana latabatra sy sakafo tao amin'ny efitra fisakafoana ireto fianakaviana ireto rehefa fantany fa ho avy ireo jiolahy. Nalefa nafenina ny vehivavy sy ny ankizy fa ilay raim-pianakaviana irery no teo, niatrika ny mpandroba. Injao tokoa, nandondona ireto jiolahy, ary dia nampandrosoin'ilay raim-pianakaviana. Mandrosoa dia mahazoa toerana tompoko, hoy izy, fa izay anananay dia anananareo.
Tsy tonga hisakafo izahay fa tonga hamono, hoy kosa ny lehiben'ireto jiolahy tamin'ny feo mibetroka mampitahotra. Mandrosoa ihany aloha e, hoy ilay raim-pianakaviana, misakafoana fa rehefa avy mihinana ianareo dia ataovy izay tokony hataonareo. Nanaiky ireo jiolahy ary dia niroso nisakafo.
Raha vao avy nihinana dia hoy indray ilay raim-pianakaviana tompon-trano: efa nanomana toerana hatorianareo ihany izahay, fa matoria aloha maka aina dia rahampitso rehefa mifoha ianareo manohy izay tokony hataonareo. Dia natory ireo jiolahy.
Nony tapitra ny torimason'izy ireo ka nifoha izy, dia niteny tamin'ilay tompon-trano : Handeha izahay. Tsy tanterakay ny fikasanay hamono anareo satria nandray anay tsara ianareo, koa ataonay ahoana no famono anareo izay nanome sakafo sy fandriana ho anay?
Avotra ireto fianakaviana ireto satria nahery nivavaka sy natoky an'Andriamanitra.